Ihe ndebiri maka ozi ederede ọ bụla ị nwere ike ịchọrọ maka azụmahịa gị Martech Zone
Ọ dị ka bọtịnụ nke oge a. Ewezuga na ọ na-eme ihe ọ bụla ụlọ ọrụ gadget n'oge gara aga enweghị ike.
Ederede ederede dị ka ụzọ dị mfe, kwụ ọtọ ma dịkwa irè iji mezuo ihe ọ bụla na azụmaahịa taa. Ndị edemede si Forbes kpọrọ ahịa ozi ederede ókèala ọzọ. Ma ọ bụ nke ị na-achọghị ịhapụ n'ihi na mkpa nke mkpanaka na ahịa dijitalụ nke oge a dị oke mkpa.
Nnyocha na-egosi na 63% nke ndị ọrụ Smartphone na-edebe ngwa ha n'aka 93% nke oge ha na-amụ anya. Na 90% nke oge, mmadụ ga-agụ ihe ederede n’ime nkeji atọ ka enwetachara ya
Ihe omuma ahia ahia ederede
Họrọ iwebata eziokwu ndị a na mgbasa ozi ederede dị irè bụ azụmaahịa mara mma.
Ohere ị hụla ọtụtụ ihe atụ nke ezigbo ụlọ ọrụ na-eji azụmaahịa SMS eme njem n'otu njem gaa nnukwu ụlọ ahịa ahụ na-achọpụtaghị ya. Ebe ọ bụ na ọ na-arụ ọrụ maka ọtụtụ ụlọ ọrụ a, ọ bụ na ihe ọ bụla site na ndị na-ere uwe na kandụl na ụlọ ahịa kọfị na kiosks ekwentị.
Polo Ralph Lauren na-etinye ahịa ozi ederede na ya mbụ ịmara obibia. Ndị ahịa ndị debanyere aha Polo Na-aga onyinye pụrụ iche nwekwara ike ịpụ iji chọpụta ahịa na ọbịbịa ọhụrụ.
Ohere bụ nnukwu ụlọ ahịa n'onwe ya na-eji ahịa ederede ederede iji kọwaa onyinye pụrụ iche yiri ya ma mee ka ndị ahịa mara banyere ihe omume na ahịa. Fairlọ ahịa Mayfair na Milwaukee, Wis. na-anabata ndị ọbịa na nnukwu ụlọ ahịa ya na weebụsaịtị yana ịgba ume Soro Club ịmụta banyere ihe ọ bụla site n'aka ndị otu - naanị ego maka imeghe ụlọ ahịa ọhụrụ na usoro ọhụụ.
Ndebiri maka Ahịa ọ bụla na Mkpa
Ka ọ dịgodị, a nnyocha nke The Alternative Board duziri chọpụtara na pesenti 19 nke ndị nwe obere azụmaahịa na-arụ ọrụ karịa awa 60 kwa izu, na ọ bụ naanị otu onye n’ime obere ndị ọchụnta ego ise na-arụ ọrụ na-erughị ogo ọrụ elekere 40 nke izu.
Na azụmaahịa, oge bara uru. Obi abụọ adịghị ya na nke ahụ. Ya mere, ọ bụrụ na oge ọ bụla ị kpebiri ịmalite mgbasa ozi nkwado ọhụrụ, zipu ihe ncheta ma ọ bụ gwa ndị ọrụ gị banyere nzukọ, enwere ndebiri maka nke ahụ?
O kwere omume ịnweta ndebiri niile dị mkpa, echekwara ya nke ọma n'otu ebe na mkpịsị aka gị. Echiche bụ na ị gaghị ewepụta ozi ahụ n'onwe gị, kama ị nwere ike iji oge ahụ mee ihe kachasị mma: iwulite azụmahịa gị.
Ndị otu na TextMagic, nnukwu ụlọ ọrụ SMS, arụgoro gị ọrụ niile, na-enye ụdị ederede ederede ọ bụla ị nwere ike ịchọrọ maka azụmaahịa gị yana nkọwa niile dị mkpa ebe a:
Dịka ọmụmaatụ, ozi ederede dị irè kwesịrị ịgụnye oku na-eme ihe, aha onye zitere ya na akara ekwentị yana obere njikọ nke weebụsaịtị nke onye zitere (ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa).
Ndụmọdụ maka Somefọdụ ofdị Mgbasa Ozi SMS
E wezụga ụkpụrụ ndị bụ isi, nke a bụ ihe onye ọ bụla nwere azụmaahịa kwesịrị ịma banyere ọtụtụ ụdị mkpọsa SMS:
Ahịa na Nkwado SMS - Ozi ederede eji ere ahịa na nkwalite kwesịrị ịnwụde iji kpọọ onye nnata ka ọ rụọ ọrụ ma n'otu oge na -emepụta echiche nke ịdị ngwa. Ndị a bụ ngwaọrụ dị irè iji kpọtụrụ ihe dịka ịzụta, nweta otu ọrịre yana iji mee ka ndị ahịa nweta nri nri ehihie na Kupọns, ihe omume pụrụ iche ma ọ bụ mgbanwe maka oge mmeghe ma ọ bụ mmechi maka azụmahịa gị.
Ihe ncheta - Ihe ncheta oru dị irè kwesịrị ịgụnye ụbọchị na oge nhọpụta ahụ, ọnọdụ, aha gị (ma ọ bụ aha ụlọ ọrụ) na akara ekwentị gị. Nke a bara uru karịsịa maka ntutu ntutu, ndị dọkịta, ndị dọkịta, ụlọ akụ, na azụmahịa ọ bụla metụtara ọrụ.
Nkwupụta SMS na mata - Nkọwa onwe onye mara mma, ọkwa na ịdọ aka ná ntị kwesịrị ịgụnye nkọwa dịka adreesị nnyefe, oge echere nke mbata, aha ụlọ ọrụ, na akara ekwentị. Ozi ndị a na-enye aka maka ụlọ akụ, yana maka ịgwa ndị ahịa ozi ọkwa dị mkpa banyere akaụntụ na ọkwa mgbanwe nzute.
Nkwenye SMS - Ọ dị mma maka ndị na-agagharị ugboro ugboro, nkwenye SMS kwesịrị ịgụnye ihe ma ọ bụ NJ ntinye akwụkwọ, aha ụlọ ọrụ, obere njikọ na weebụsaịtị ụlọ ọrụ, yana ozi ekele. A na-eji ndị a oge niile maka ihe ncheta ụgbọ elu, mgbanwe na oge ụgbọ elu, ntinye akwụkwọ na họtel, na nkwenye ịkwụ ụgwọ.
Mgbe a bịara n’ime ihe dị mfe maka azụmaahịa gị, ihe kachasị mfe i nwere ike ime bụ pịa eziga.
Ederede ederede dị ka ụzọ dị mfe, kwụ ọtọ ma dịkwa irè iji mezuo ihe ọ bụla na azụmaahịa taa.
Na ndị ọkachamara na TextMagic chọrọ inyere aka mee ka ọ bụrụ ngwá ọrụ ị na-eji maka azụmaahịa gị, yabụ ị nwere ike ilekwasị anya n'ihe kachasị mma. Companylọ ọrụ ahụ na-enye ikpe n'efu n'efu ọ bụrụ n'ịchọrọ ịmalite iji ederede ederede.
Tags: Mobile na Mbadamba ụrọahịa efuPolopolo na njempolo ralph laurensms nkwadonkwado ederede ederedesmartphoneSMSSMS mataSMS notma Ọkwaklọb ederedeederede ederedeozi ederedendebiri ederede ederedeozi ederedencheta ozi ederedeihe nchetaederede
Anastasia Sviridenko bụ onye njikwa ahia ọdịnaya na TextMagic, niile na-na-otu nnukwu SMS ngwọta maka azụmahịa. TextMagic bụ ọrụ na-enye ohere maka obere na nnukwu azụmaahịa iji duzie mkpọsa ahịa SMS, zipu ozi, ọkwa, na nkwenye.
Youtube: Gini bu uzo vidiyo gi n’ebe ahu?
Daalụ maka ịkekọrịta ozi bara uru dị otú ahụ. Ọ bụ eziokwu na ozi ederede ọ bụla nwere usoro pụrụ iche maka azụmaahịa SMS dịka maka ozi nkwenye na-enwe ndebiri dị iche iche metụtara ndị ọrụ ederede ndị ọzọ.